ओमकार टाइम्स कपिलवस्तुमा आगजनीको जिम्मा विप्लव समूहले लियो – OMKARTIMES
कपिलवस्तुमा आगजनीको जिम्मा विप्लव समूहले लियो
काठमाडौं । कपिलवस्तुका दुई स्थानमा स्काभेटर र जेसीभी डोजरमा आगजनी गरेको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले लिएको छ ।
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका र शिवराज नगरपालिकामा हुलाकी सडक निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएका ६ वटा गाडीमा गएराति आगजनी गरिएको थियो । ती गाडीहरु हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीका हुन् ।
घटनास्थलमा भेटिएको पर्चामा शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीले विकास निर्माणको नाममा लुट मच्चाएको आरोप लगाइएको छ । गुणस्तरहीन काम गरेको, निर्माणको क्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति नदिएको लगायतका आरोप पनि लगाइएको छ ।
गएराति करिब एक बजेतिर विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर २ लोहरौलामा एउटा स्काभेटर, दुईवटा जेसीभी र दुईवटा पिकअप भ्यानमा तथा शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ९ तुरन्तपुरमा एउटा स्काभेटरमा आगजनी भएको थियो । आगजनी गर्ने क्रममा सडक निर्माणको काममा खटिएका कर्मचारीहरुलाई कोठाभित्र थुनिएको पीडितलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७६ फाल्गुन २२
आजको मौसम कस्तो रहला ?
आफू जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि सेनालाई सहयोग गर्नेछु- उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
दशैँमा पनि वाग्मती सफाइ अभियानले निरन्तरता पाउने
कोरोना संक्रमित राप्रपाका अध्यक्ष थापा आइसियूमा
परिवारका सदस्यमाझ मात्र दशैँतिहार मनाउन आग्रह
आज सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस् ?
आज नयाँ संक्रमित २ हजार ८५६ थपिए
कुटपिट गरि आफ्नै आमाको हत्या
अब एकल पुरुषलाई पनि मासिक भत्ता